Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment बाबुराम भट्टराईसहित ३३ सांसदले फिर्ता गरेनन् दसैं भत्ता - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, ९ मंसिर : गत कात्तिक पहिलो साता सांसदहरुले दसैं भत्ता लिएको समाचारले धेरैको ध्यान तान्यो । यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पनि भूमिका खेले ।
त्यसबेला डा. भट्टराईले दसैं भत्तासँग जोडिएर तीनवटा ट्वीट गरेका थिए । जहाँ उनले सांसदको मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारीको समेत दसैंमा वितरण हुने अतिरिक्त तलब भत्ता रोक्न माग गरेका थिए । सर्वत्र आलोचना भएपछि सांसदहरुले धमाधम दसैं भत्ता फिर्ता गरे । तर, तिनै डा. भट्टराईले भने अझैसम्म दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार दसैं भत्ता फिर्ता नगर्ने संसदहरुमा डा. भट्टराई एक्ला सांसद भने होइनन् । भट्टराईको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकजना बाहेक सबै सांसदले दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् । हाल जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् भने रेशम चौधरी जेलमा छन् ।
संसद सचिवालयले भने सांसदहरुको दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि जसपाको तर्फबाट कुनै चिठी नआएको बताएको छ ।
‘जसपाका सांसदहरुले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएको सुनिएको थियो । तर, पत्र आएको छैन के गर्ने हो ? भन्दै पटक–पटक फोन गरियो । चिठी नआएसम्म केही नगर्नु भन्ने जवाफ पाएपछि जसपाका सांसदहरुको दसैं भत्ता कटौती नगरेरै कात्तिक महिनाको तलब पठाइएको छ’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
‘१५ दिनको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भनेर अन्य पार्टीको पत्र आयो तर, तत्कालीन समाजवादीका कुनै सांसदले न व्यक्तिगत रुपमा पत्र पठाए, न त पार्टीका तर्फबाट । त्यसकारण, उहाँहरुको १५ दिनको तलब कोरोना कोषमा गएको छैन’ सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो । ‘के गर्ने ? भनेर पटक–पटक भनियो तर, पार्टीको चिठी नआएसम्म केही नगर्नु भन्ने उतिबेलाको जवाफ थियो’ संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।